Bucky Barnes မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
07 / 08 / 2021 07 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 217 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Bucky ကျီများ, ဗိုလ်ကြီးဂarter, dum dum dugan, Lego, Lego မှ marvel, Marvel, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
27 / 07 / 2021 27 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 556 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Agatha Harkness, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ကြောကျတိုငျ, Disney+, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, သဘော, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်
26 / 07 / 2021 26 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 3853 Views စာ0မှတ်ချက် 71030 Looney တီးလုံး, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Spider-Man, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Wanda, WandaVision, အဖြူရောင်အမြင်
အဆိုပါ Lego Marvel Collectible Minifigures ကောလာဟလများထွက်ပေါ်လာတော့မည်
20 / 07 / 2021 20 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 394 Views စာ0မှတ်ချက် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Gamora, Instagram ကို, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Minifigures, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, သေးသေးလေး, ကောလာဟလာ, ဆမ် Wilson, Thanos, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
ကောလဟာလအကြောင်း LEGO နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစားပုံသဏ္haveာန်များသည်အွန်လိုင်းပေါ်ထွက်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့အားပြည့်စုံသောရုပ်ပုံလွှာတစ်ခုပေးသည်
09 / 07 / 2021 09 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 823 Views စာ0မှတ်ချက် 76178 နေ့စဉ် Bugle, Avengers, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ကောလာဟလများ, Lego Spider-Man, Loki, Marvel, Peter Quill, ကောလာဟလာ, Scarlet စုန်းမ, Spider-Man, ကြယ်စင်သခင်, Sylvie, Thanos, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါ LEGO Group, Throg, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, Wanda, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်
23 / 04 / 2021 23 / 04 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 876 Views စာ0မှတ်ချက် Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဗြိတိန်, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Gamora, Lady Loki, Lego, Lego မှ marvel, Lego ကောလာဟလများ, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, မော်နီကာရက်ဘို, ကောလာဟလာ, ကောလာဟလများ, ဆမ် Wilson, Scarlet စုန်းမ, Spider-Man, စတား-သခင်ဘုရား, စွန်ငှက်, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်, ဝှိုက်ဖြူ, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်
20 / 04 / 2021 20 / 04 / 2021 ခရစ် Wharfe 1118 Views စာ0မှတ်ချက် Bucky ကျီများ, Captain America, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Gamora, Instagram ကို, Lady Loki, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ကောလာဟလများ, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, ကောလာဟလာ, ဆမ် Wilson, Scarlet စုန်းမ, Spider-Man, စတား-သခင်ဘုရား, စတိဗ်ရော်ဂျာ, T'Challa, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Throg, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်